नेपाली राजनीतिमा प्रचण्डले तरङ्ग नल्याए मोनोटोनस जस्तो हुन्छ- जनादर्शन शर्मा
Tuesday, 04.03.2018, 01:39pm (GMT5.5)
० समय जति बित्दै गयो एमाले माओवादी पार्टी एकीकरणमा नयाँ नयाँ विवाद र देखापर्न थाले ? कारण के हो ?
पार्टी एकताको लागि बनेका दुईवटा कार्यदलले आफ्नो काम गरिसकेका छन् । संयोजन समितिमा हामी आआफ्ना प्रस्ताव बुझाउने तयारीमा बसेका छौं । एक दुई दिनमा संयोजन समिति बैठक बस्छ र त्यसमा थप छलफल हुन्छ । हामीले तयार पारेको प्रस्तावमा संयोजन समितिले आवश्यक ठानेमा थपघट गर्न सक्छ । तर, हामीले सकभर धेरै तलमाथि नहोस् भनेर निकै मेहनत गरेका छौं ।
निर्वाचन पूर्व एकसाथ चुनावमा जाने, चुनावी तालमेलमात्र होइन कि पार्टी एकता गर्ने निर्णय गरेर गएका हौं । हामीले आम जनता, मतदाता, कार्यकर्ता र नेतासम्म एकैसाथ लग्यौं । त्यसमा कसैको बिरोध र असहमति रहेन । निर्वाचनको एउटा अभियानको क्रममा पार्टी एकताको सन्दर्भमा असहमति थियो भने पनि सहमति नै व्यक्त भयो । तेस्रो कुरा त्यसले परिणाम प्राप्त गरेको छ र त्यो परिणामका आधारमा हामीले सरकार गठन गरेका छौं । अब कतै पनि पार्टी एकता नहुनुपर्ने, ठूलै अड्चन आउनुपर्ने र पार्टी एकता पछि हट्ने अवस्था म कुनै कारण र तर्क देख्दिनँ ।
० तर प्रचण्डले ५०।५० समान हैसियतमा मात्र एकीकरण हुने भनेपछि तरंग त ल्यायो नि ?
नेपाली राजनीतिमा तरङ्ग ल्याइएन भने मोनोटोनस जस्तो हुन्छ क्या । तपाईहरू पनि मान्नु हुन्न नि । विद्यार्थीको कार्यक्रममा अध्यक्ष जानुभएको थियो । कसरी पार्टी एकता हुन्छ भन्ने जिज्ञासा आएपछि समानताको आधारमा एकता हुन्छ भन्ने स्पिरिटको आधारमा उहाँले भन्नुभएको हो । त्यही एउटा तरंग बन्यो । अहिले सबैको ध्यान पार्टी एकतामा केन्द्रित छ भन्ने कुरा यसले पुष्टि गरेको छ ।
० ५०।५० को कुरा बटमलाइन हो कि होइन ?
पार्टी कमिटीहरूको एकता समानताको आधारमा जान्छ, नम्बर र प्रतिशतमा हुँदैन । अर्थात ५०।५० पनि होइन ६०।४० पनि होइन । बराबरी भनेर बुझाउने क्रममा समानताको आधारमा एकता गर्ने भनिएको हो । अर्को कुरा, एकतामा बटमलाइन राखेर हुँदैन र अध्यक्षले पनि बटमलाइन भन्नुभएको छैन । अध्यक्षले समानताको आधार भनेर संख्या भन्नु भएको होइन, सैद्धान्तिक आधार भन्नुभएको हो ।
० कम्युनिष्टहरूका कतिपय भाषा सर्वसाधारणले बुझ्नै गाह्रो हुन्छ, आम मान्छेले बुझ्ने भाषामा बताइदिनुस्, संगठनको एकीकरण कुन आधारमा हुन्छ ?
प्रतिशतमा बाँडफाँट हुँदैन । दुईटा पार्टीको संगठन र संरचना छन् । हाम्रा विचार र नीति छन् । त्योभन्दा ठूलो हाम्रो लक्ष्य छ । हाम्रो लक्ष्य समान छ भने त्यो लक्ष्य र सिद्धान्त प्रतिशतमा बाँडिन्छ र ? समान लक्ष्य राखेर हिँडेपछि संगठन मिलाउँदा व्यवहारिक पक्ष, मनोविज्ञान, समानता, जनमत सबैलाई हेरिन्छ । एउटाले जितेको र अर्कोले हारेजस्तो हुँदैन । एउटाले जितेर अर्कोले हारेको जस्तो बनाइयो भने त्यहाँ एकताको स्पिरिट व्यक्त हुँदैन । चुनावमा जाने बेला प्रतिशतमा गइयो । अब समानताको आधारमा सबै पक्ष मिलाएर समझदारीका आधारमा हुन्छ ।
० यो त आदर्शको कुरा भयो तर, भोलि २९९ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा एमालेका कति, माओवादीका कति भनेर त बाँड्नुपर्ला नि ?
० अनि चुनाव चिन्ह सूर्य राख्न माओवादी असहमत भएको र विधानको प्रस्तावनामा जनयुद्ध शब्द राख्न एमाले असहमत भएको त सत्य हो नि, यो कसरी मिलाउनुहुन्छ ?
हामी असहमत र सहमत दुवै भएका छैनौं । चुनाव चिन्हबार माथि नेताहरूले निर्णय गर्नुहुन्छ भन्यौं, त्यसमा डिबेट गरेनौं । प्रस्तावनामा हिजोको सन्दर्भमा जनयुद्ध जनआन्दोलन आदि इत्यादी हुँदै संघीय गणतन्त्र समावेशी समानुपातिक संविधान बनायौं भनेर लेख्यौं । जनयुद्ध आज गर्ने भनेको होइन । हिजोको सन्दर्भमा इतिहासमा भएको एउटा परिघटना हो भनेर विना विवाद लेखेका छौं । कहाँनेर कसरी राख्ने भन्ने कुरा त मिलाउनुस् भनेका छौं । हिजो जनयुद्ध भएको त हो भन्नेमा विवादको विषय होइन । अलिअलि तपाईहरूजस्तो साथीहरूलाई समाचार बनाउन मन लाग्छ, त्यहि भएको मात्र हो ।
० तपाई पार्टी एकता प्रक्रियाको शुरूदेखि नै संलग्न हुनुहुन्छ, अब सबैभन्दा पेचिलो कुन कुरा बन्ने देख्नुहुन्छ ?
सैद्धान्तिक कुरा नै पेचिलो हुने हो । सैद्धान्तिक कुरामा सहमति भएपछि अरू प्राविधिक कुरामा आएर पेचिलो बनाइयो भने त्यो असैद्धान्तिक हुन्छ । मार्गदर्शक सिद्धान्त माक्र्सवाद लेनिनवाद, पार्टीको नाम नेकपा हुन्छ भनिसक्यौं । जबज लगायतका विषय पछि टुंगो लगाउने भनिसक्यौं । समाजवादलाई निर्दिष्ट लक्ष्य राख्ने भनिसक्यौं । संविधानले भनेका कुरा मान्ने भनेकै छौं ।
हाम्रोमा भनिन्छ ४० नम्बर धारा लेनिनले भन्नुभएको छ । त्यो भनेको संगठनमा को बस्ने को नबस्ने भन्ने हो । पार्टी एकताको सन्दर्भमा हामीले आआफ्ना कुरा त्यागेर नयाँ ठाउँमा आउँदैछौं । आआफ्ना लिगेसी त्यागेर नयाँ पार्टी बनाउने भनेकाले त्यागको स्पिरिट मान्नुपर्छ । सबैको प्रतिनिधित्व पनि हुनुर्पयो । नेतृत्वको टिम बन्छ, कमिटीविहीन हुँदैनौं । केन्द्रीय कमिटी मात्र होइन, प्रदेश कमिटी अझ बलियो छ ।
० तैपनि अध्यक्ष प्रचण्डको व्यवस्थापनको सुनिश्चितता नभएसम्म अझै पनि एकीकरण नहुन सक्छ, अहिलेको प्रचण्डको अभिव्यक्ति त्यसको संकेत हो ?
प्रचण्ड नयाँ पार्टीको एउटा अध्यक्ष हुने निर्णय भइसकेको छ । उहाँको व्यवस्थापन भइसकेको छ । एउटा अध्यक्ष केपी ओली र अर्को अध्यक्ष प्रचण्ड हुने त सहमति भइसक्यो । अर्को कुरा प्रचण्डको मात्र व्यवस्थापनले पार्टी एकता हुने होइन । यहाँ अरू नेताहरूको व्यवस्थापन पनि हुन्छ । कार्यकर्ताको पनि व्यवस्थापनको कुरा छ । केपी ओली आफैं अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । प्रचण्ड अर्को अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।
० अनि ओलीपछि प्रधानमन्त्री पनि..?
भावी प्रधानमन्त्री त भोलि भावी कार्यकारी राष्ट्रपति भने हुन्छ । उहाँहरू नै हाम्रो मुख्य नेता । उहाँहरूलाई हामीले मुख्य मानेका छौं । राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री के बन्ने, उहाँहरूले चाहेको हुनुहन्छ । निर्णय गर्ने उहाँहरूले भोलि पनि । उहाँहरूले गर्ने निर्णयमा हामीले किन चिन्ता लिने ? हामीले सैद्धान्तिक र नीतिग कुरा मिलाइसक्यौं, संगठनको पनि मिल्छ ।
० प्रचण्डले दुई वर्षभित्र हुने भनिएको महाधिवेशनबाट अध्यक्ष बन्ने कुराको सुनिश्चिता खोजेको हो कि ?
त्यो कुरा तपाई एउटा सञ्चारकर्मीको हिसाबले सोच्न सक्नुहुन्छ । यसमा तपाईहरूलाई स्वतन्त्रता छ । के गर्ने भन्ने कुरा पार्टीले निर्णय गर्छ क्या । पार्टीभन्दा ठूलो न प्रचण्ड, न केपी ओली । भोलि को अध्यक्ष हुन्छ भन्ने अहिले कल्पना गर्न सकिन्न ।
० नेताहरूको बरियताक्रम चाहिँ के हुन्छ ?
उहाँहरूको बरियताक्रम आन्दोलनले जनताले निर्धारण गरिदिएको छ त । पार्टी बैठक बस्दा हामीले आलोपालो भनेका छौं । अध्यक्षता गर्ने अध्यक्ष पहिलो बरियतामा हुन्छ । अध्यक्षता नगर्ने अध्यक्ष दोस्रो नम्बरमा हुन्छ । बाँकी बरियता जनताले निर्धारण गरिदिएकै छन् । हामीले निर्धारण गर्नु पर्दैन ।
० त्यसो भए पार्टी एकता कहिले हुन्छ ?
० एकता गर्न र नगर्न अन्तर्रा्ष्ट्रिय दबाव त आएकै होला होइन ?
केलाई दबाव मान्ने केलाई नमान्ने भन्ने हुन्छ । तपाईले गरेको प्रश्नलाई मैले दबाव मान्ने कि नमान्ने ? मुख्य कुरा हामीले के गर्दैछौं भन्ने हो । हामो एकता सबैलाई मन परेको होला त ? अहिले केके रिपोर्ट आए नि त, ती रिपोर्ट सायद यहि एकताले गर्दा आएको होला । हाम्रो संविधानको ब्याख्या गर्ने अधिकार हामीलाई छ नि त । हामी भनेको जनतालाई मात्र अधिकार छ । पार्टी एकता नहोस भन्ने कामना पनि होला उनीहरूको । तर, नेपाली जनताको चाहनाले काम गर्छ । हाम्रो कुरा हामीले गर्ने हो, हामी गर्छौं ।
० एकीकरण हुँदै गर्दा केही नेतालाई तपाईहरूले कारवाही गर्नुभयो, कति प्रतिशत हिस्सा एकीकरण बाहिर जाला ?
त्यस्तो छैन । सबैलाई यो कुरा मन पर्छ भन्ने पनि छैन । मुख्य कुरा के हो भने नेपालमा छरिएर रहेको दुई तिहाई भन्दा बढी वाम जनमतलाई एकत्रित गरेर नेपालको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण सहित राष्ट्र बलियो बनाउने अभियानमा हामी गएका हौं । यो कुरा बुझ्दै जाँदा बुझाउँदै जाँदा यो अभियानबाट बामपन्थी कम्युनिष्ट प्रगतिशिल चेत भएको कोही पनि अलग हुँदैन ।
० तर विप्लवहरू झोला थापेर बसेका त छन् नि ?
ती बहसलाई पनि हामी समेटौंला । विप्लवजीहरूसँग पनि बहस गरौंला । कुरा बुझिसकेपछि सबै समेटिदै जानेछन् ।मुख्य कुरा, अहिलेको सरकार बनेको छ, प्रधानमन्त्रीले जुन अडान र स्पिरिट राख्नुभएको छ, नेपालको इतिहासमा यो निर्वाचनपछि पहिलो पटक सम्बृद्धि, भ्रष्टाचारबिरूद्ध बहस भयो संसदमा । सबैले भन्न बाध्य भए, अब राष्ट्र सम्बृद्धिको बाटोमा जानुपर्छ, हामी तयार छौं । भ्रष्टाचारका विरूद्ध प्रधानमन्त्रीको अडानमा सबै सहमत भएका छन् । अब यो बहसको निरन्तरता जान्छ ।
० ५ वर्षको बीचमा काँध फेरिने सम्भावना छ कि छैन ?
काँध फेरिने नफेरिने कुरा हावा लाग्छ कि लाग्दैन रूख ढल्छ कि ढल्दैन भन्ने कुरा जस्तो हो । ५ वर्ष यो सरकारले आफ्नो नीति र योजना लागू गर्छ । प्रतिपक्षले पनि सम्बृद्धिमा साथ दिन्छौं भनेको छ । अब राजनीतिक नेताहरूलाई भाषण गर्ने र काम नगर्ने छुट कति पनि छैन । भाषणको आधारमा नेता हुने समय सिद्धियो ।
० हामी विप्लवको कुरा गर्दैथियौं, उनका गतिबिधिलाई अब कसरी डिल गर्नुहुन्छ, राज्यको नजरमा विप्लवको पार्टी के हो ?
राज्यको नजरमा विप्लव के हुन् राज्ययलाई सोध्नुस् । म गृहमन्त्री भएको बेला सोधेको भए जवाफ दिन्थेँ र दिएको पनि थिएँ । मेरो कुरा भन्नुहुन्छ भने विप्लवले राजनीतिक रूपमा एकीकृत जनक्रान्ति भन्नुभएको छ । मैले उहाँलाई तपाईले भनेको कुरा अधूरो छ भनेको छु । हामीसँग मिलेर मात्र त्यो पूरा हुन्छ । विप्लवजीसँग राजनीतिक रूपले व्यवहार गर्ने हो, उहाँसँग सहकार्य गर्ने र उहाँलाई पनि एकीकृत गरेर जाने हो । त्यो व्यवहार हुनेछ । उहाँहरूका गतिबिधिको बारेमा सरकारलाई थाहा होला । म राजनीतकि रूपमा त्यो कुरालाई समाधान गर्न चाहान्छु, सरकारले आफ्नो काम गर्छ ।
० निकै मेहनत गरेर केपी प्रचण्ड मिलाउनुभयो, फेरि पार्टी एकतापछि ओली र प्रचण्डको अलग अलग गुट हुने होला होइन ?
हरेक व्यक्तिका आफ्ना क्षमता, सोच र दृष्टिकोण हुन्छन् । राजनीतिको परिभाषा मैले अचेल यसरी भनेको छु । राजनीति भनेको सामुहिक म्याराथन दौड हो । व्यक्तिले जित्ने म्याराथन होइन । हजारौं लाखौं मान्छे एकैसाथ दौडिरहेका हुन्छन् र कुन व्यक्ति अघि पुग्यो भन्ने अर्थ हुँदैन । सबैभन्दा पछिल्लो पंक्ति पुग्यो कि पुगेन भन्ने अर्थले त्यसको सफलता र असफलतालाई निर्धारण गर्छ । म एक्लै बलियो छु भनेर दौडिएर राजनीतिको खेलाडी बन्न सकिँदैन । पछिल्लो पंक्तिलाई ठीक ठाउँमा पु¥याउने दायित्व नेतृत्वमा हुन्छ ।
पार्टी एउटै भएपछि मुख्य इस्युमा एकता हुन्छ । समाज जस्तो छ, पार्टी पनि त्यस्तै हुने हो । तर, त्यसको समाधान हामी विधिले गर्छौं । अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता काम कारवाहीमा एकरूपता भन्ने हाम्रो पार्टी सञ्चालनको सिद्धान्त हो । कमिटी हुन्छ, गुट पनि होला तर, विधिले हल गरिन्छ । नेता पार्टी सदस्यद्धारा निर्देशित हुन्छ । पार्टी सदस्य सार्वभौम छन् । नेताहरू त्यसप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ ।